Maninona no misafidy Chunkai？
Nahoana isika no mila manasaraka ny varotra amin'ny orinasa? Na dia somary misavoritaka aza ity fanapahan-kevitra ity, ny teboka voalohany dia ny manantena fa hiaina ny serivisinay tsara indrindra amin'ny mpanjifa ny mpanjifantsika amin'ny toerana tsaratsara kokoa.
Karazana fitaovana fonosana biodegradable sy Recyclable
Soa ihany fa maro ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny fonosana voajanahary sy azo averina ampiasaina. Anisan'izany: Taratasy sy baoritra - azo ampiasaina indray ny taratasy sy ny baoritra ary azo averina simba sy azo zahana indray. Misy tombony maromaro amin'ity karazana vokatra fonosana ity, tsy latsa-danja amin'izany fa ...
Fa maninona no zava-dehibe ny safidin'ny boaty fonosana manokana?
Tsy misy mahita ny zavatra raha vao jerena. Ny endrika ivelany na ny fisehosehoana no eo imasonao aloha. Raha mahasarika ny mpanjifa ity fisehoana na fizahana ity dia hividy ny vokatra tokoa izy ireo, raha tsy izany, ny fahaverezan'ny anjaranao. Raha tsy mahomby ny fahitana voalohany ny boaty fonosana vokatra ...
Pizza Box avo lenta amin'ny habeny samihafa
Boxes Pizza mitafo poara avo lenta dia manamboatra andian-tsarimihetsika pizza marokoroko marobe izay misy habe samihafa. Manam-pahaizana manokana amin'ny boaty pizza vita pirinty natokana ho an'ny fivarotana rojo avy amin'ny fivarotana 4-50 izahay. Manana ny fahaiza-manao amin'ny hazakazaka kely koa isika. Natao hanafarana toerana sy ...